मध्यपुरमा राष्ट्रव्यापी मेयर कप चेस प्रतियोगिताको आयोजना
भक्तपुर, कात्तिक २६ । मध्यपुरथिमि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जन्माउने उद्देश्यले मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा पहिलोपटक राष्ट्रव्यापी मेयर कप चेस प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–४ कार्यालयले आज यहाँ
–नारायण न्यौपाने काठमाडौँ, २६ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले अब हुने आवधिक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भनी तयारीका लागि गृहकार्यमा जुटेको छ । त्यसका लागि कुन–कुन
जुम्ला, कात्तिक २६ । तत्कालीन कर्णाली अञ्चल आयुर्वेद औषधालय अढाइ वर्षदेखि चिकित्सकविहीन हुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । डा रमेश केसी ०७२ मङ्सिर महीनामा सरुवा भएर गएपछि केही समयपछि अस्थायीरूपमा
काठमाडौँ, कात्तिक २६ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले कारोवार रकम तलमाथि परेको भन्दै आएको गुनासो हल्ला मात्रै भएको जनाएको छ । कारोवार रकमलगायतका विषयमा अन्योलता बढेपछि केही लगानीकर्ताले एउटा दलालको देखिरहेको
–हिमांशु चौधरी जनकपुरधाम, कात्तिक २६ । आस्थाको महापर्व छठ तराई भेगका साथै देशका विभिन्न स्थानमा भोलि हर्षोल्लासका साथ मनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिला तराईवासीमा मात्र सीमित रहेको यो
काठमाडौँ, कात्तिक २६ । धितोपत्र बजारमा आज पनि शेयरको मूल्यमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १३ दशमलव ०३ विन्दुले ओरोलो लागेर
काठमाडौँ, कात्तिक २६ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी आज चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ । हुआन शहरमा यही कात्तिक २८ देखि ३० सम्म आयोजना हुने ‘चाइना
काठमाडौँ, कात्तिक २६ । नयाँ नोट सटहीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समावेशिताको नियम लागु गर्ने भएको छ । यसअघि बडादशैँका बेला मात्र ठूलो परिमाणमा नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गदैँ
पचली भैरव मन्दिर संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै
काठमाडौँ, कात्तिक २६ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१२ टेकुस्थित पचली भैरव मन्दिर संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पले मन्दिरमा क्षति पुगेपछि मन्दिर तथा त्यस आसपास क्षेत्रमा जोखिम
म्याग्दी, कात्तिक २६ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मानवीय लापर्बाहीका कारण हुने क्षति न्यूनीकरणमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बेनीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थापना भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सोमबार
काठमाडौँ, कात्तिक २६ । प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा राजन भट्टराई र प्रमुख स्वकीय सचिवमा इन्द्र भण्डारी नियुक्त हुनुभएको छ । भट्टराई पूर्वसांसद र भण्डारी तत्कालीन नेकपा (एमाले) मेची काठमाडौँ सम्पर्क
वैदेशिक रोजगार कसूर मुद्दामा दोषी ठहर डिसी जेल चलान
काठमाडौँ, कात्तिक २६ । वैदेशिक रोजगार कसूर मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार हुँदै आएक एक व्यक्ति आज जेल चलान भएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का निर्देशक निरजबहादुर शाहीका
मन्त्रिपरिषद् बैठक : निर्णय नयाँ प्रबन्धबाट सार्वजनिक हुन
काठमाडौँ, कात्तिक २५ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे सरकारले तत्काल जानकारी नदिई नयाँ प्रबन्धबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको बैठकमा धेरै विषयमा
काठमाडौँ, कात्तिक २६। महिला ओलम्पिक–२०२० को एसिया क्षेत्रको छनोट चरणको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले म्यान्मासँग बराबरी खेलेको छ । म्यान्माको याङ्गोनस्थित थुनुवा स्टेडियममा भएको समूहको दोस्रो
संघिय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयले बिभिन्न आयोगहरुमा ६ सहसचिब खटायो, कस्लाई कहाँ ?
काठमाण्डौं । कार्तिक २५ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रशासनीक कार्य सञ्चालनका लागि बिभिन्न ६ वटा आयोगमा मन्त्रालयका सहसचिबहरुलाई काजमा खटाएको छ । मन्त्रालयको आज
सप्तरी, कात्तिक २५ । दशैँ, तिहार र छठ पर्वका अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले आज राजविराजमा शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम गरेको छ । सो अवसरमा नेकपाका प्रदेश इञ्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले
भारतीय गाडीको ठक्करबाट आज धादिङमा दुई युवतीको ज्यान गयो
काठमाण्डौं । कार्तिक २५ । भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीको ठक्करबाट आज बिहानै धादिङमा दुई युवतीको ज्यान गएको छ । धादिङ रोराङ गाउँपालिका ५ बिशालटारमा युपि ७५ एजे
शुभराजलाई मामाघरनै असुभ ! लोड गरिएको बन्दुक सहित मामाघरबाट भाञ्जा पक्राउ
काठमाण्डौं । कार्तिक २५ । भरुवा बन्दुक सहित मामा घरबाट एक युवक पक्राउ परेका छन् । खोटाङको दिप्रुङ गाउँपालिका ४ घर भएका २७ वर्षीय शुभराज राईलाई लोड
नुवाकोटको थानापतिमा मानिस मृत अवस्थामा भेटीए, हत्या भएको आशंका
प्रविण थपलिया । नुवाकोट । कार्तिक २५ । नुवाकोटको शिवपुरी गाँउपालीका वडा नं ८ थानापतिमा एक जना जेष्ठ नागरीक मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । बिगत ४० दिन देखि
नुवाकोटमा स्यालको आतङ्क
बेत्रावती, कात्तिक २५ । नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा स्यालले आतङ्क मञ्चाएको छ । जङ्गलबाट बस्ती पसेको एक स्यालले वडा नं १ को ढिकुरेबजार, वडा नं ४ को चौघडाबजारलगायत
बर्दिवास, कात्तिक २५ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सीपमूलक व्यावसायिक शिक्षा मुलुकको समृद्धि अभियानका लागि अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ । शनिबार महोत्तरीको बर्दिवास–६ किसाननगरमा नवस्थापित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन
परासी, कात्तिक २५ । पश्चिम नवलपरासीको विकट पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा सञ्चार सेवाको सहज पहुँचमा पुगेका छन् । पश्चिम नवलपरासी तराई भए पनि यहाँ विकट पहाडी क्षेत्र पनि छ ।
काठमाडौँ, कात्तिक २५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रि«य विभूति तथा समाज सुधारक फाल्गुनन्दले सामाजिक विकृति, विसङ्गति हटाउनका लागि शुरु गर्नुभएको अभियान आज पर्यन्त स्मरणीय रहेको बताउनुभएको छ । फाल्गुनन्दको
आलेख ः फाल्गुनन्दको १३४ औँ जन्मजयन्ती आज, विशाल शालिक अनावरण गरिँदै
– चन्द्रकला भण्डारी भद्रपुर, कात्तिक २५ । आजभन्दा ८७ वर्ष अघि किरात समुदायका अगुवाहरुलाई भेला गराएर जन्म, विवाह र मृत्यु संस्कारमा मासु र मदिरा चलाउन नहुने सहमतिपत्रमा सहीछाप गराउने
प्रदेश नं ३ को स्थायी राजधानी र नामकरण छिट्टै टुङ्गो लाग्ने
हेटौँडा, २४ कात्तिक (रासस) ः प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण छिटो टुङ्गो लाग्ने जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तिहार र
Pages 564 : You are at page 374 of 564